Iikhosi zoncwadi kwihotele Kafka | Uncwadi lwangoku
Andiqondi ukuba kufuneka ube ngumbhali ukuze ubhale ngokuchanekileyo, kodwa eli nqaku lenzelwe abo bafundi nabo babhalayo kwaye bafuna ukufunda iindlela ezintsha zokubhala okanye wandise ulwazi lwakho malunga nalo.
Mna ndenze ikhosi yokubhala engaqhelekanga ngelo xesha kwaye namhlanje ndiyayixabisa, nangona ndingabandakanyi konke konke ukwenza enye okanye enye ngaphezulu. Ngesi sizathu, kwaye kuba ndicinga ukuba eli phepha lihle kakhulu xa kusiziwa ekunikezeleni iindibano zocweyo zokubhala kunye nezifundo Inomdla kakhulu, ndikushiya kunye neyona nto indithathele ingqalelo. Yiwebhu ye Ihotele Kafka kwaye iikhosi zayo zivulwa kungekudala (ngeenyanga zika-Epreli nango-Meyi) kunye nezo zizonke 'kwi-intanethi' kwaye iqala veki nganye.
1 Ikhosi yokuyila yoyilo mna
2 Inoveli ikhosi esebenzayo
3 Iworkshop yebali elililo
Ikhosi yokuyila yoyilo mna
Utitshala wale khosi ukwangumlawuli wehotele Kafka. Imalunga ne UEduardo Vilas. Inkcazo yekhosi iqala ngolu hlobo: «Umgama phakathi kwento ekucingelwa, eyathethwayo okanye ebhaliweyo iba nkulu xa sisenza isicatshulwa soncwadi. Ukukhula kwengcinga kufuneka kudlule kuthotho lweesefu ezizezendibano, kwezentlalo, kwaye ngamanye amaxesha ezinomtsalane kwindalo iphela. Ulwazi lwabo lusenza ukuba sifumane ulawulo olukhulu kunye nesigqibo kwinto esiyicingayo nesiyibhalayo. Ngokusebenzisa imithambo eyahlukeneyo kunye nokufunda, siya kuzama ukuwufinyeza loo mgama, sifune izixhobo kwaye siphande iilwimi zethu, sishenxise izicatshulwa zethu sizisondeze kwingcinga esinethemba okanye esifuna ukuba ibe yiyo ... »
Ukuba ufuna ukuthatha le khosi, eyakho I-temary yile ilandelayo:
Ukuchongwa nokukhethwa kwembono.
Iindlela zonxibelelwano phakathi kwabalinganiswa.
Ixabiso layo ngama-225 euros kwaye imeko yayo yi-100% yobuso ngobuso eMadrid.
Inoveli ikhosi esebenzayo
Utitshala wakho URonaldo Menendez, oyinzalelwane yaseHavana. Ngokwenkcazo yayo, yikhosi eyenzelwe abafundi abatsha nabadala. Kuya kunikwa ubuchule obutsha ekubhaleni inoveli, kananjalo kube nokufumaneka ingcebiso ethile kunye neengcebiso ezizezakho kwiiprojekthi ezilandelwayo kwabo sele besebenzile kumxholo wenoveli. Ixabiso layo ngama-250 euros.
Su I-temary oku kulandelayo:
Intshayelelo. Incwadana njengomsebenzi ovulekileyo, imida yayo eguquguqukayo kunye neenkqubo zokubalisa. Zivela phi zonke iindlela zobuchule kunye nokuqonda kwinoveli? Ubuhlobo buni na le mveliso yale mihla, eyinoveli, kunye nezixhobo zayo zokubhala kunye nokukhangela kwayo iindlela ezifanelekileyo zobuhle kunye zonxibelelwano?
Le mpikiswano, ingaba iyasebenza kwinoveli? Umbono wombhali phambi kwenkqubo yeploti kunye 'namathambo' wento afuna ukuyibalisa.
Ukukhetha umbalisi, indawo yokujonga kunye nokunxibelelana kwayo neentlobo ezahlukeneyo zeemonologuesUmntu wokuqala, owesibini nowesithathu, imida kunye nokusetyenziswa. Ukuhamba kunye nokutsiba, umbono ophindaphindiweyo. Ingxelo igxile: zero, ukujolisa kwangaphakathi nangaphandle. I-Polyphony kunye namazwi.
Umlingiswa, umdlalo weqonga, iingcinga ezinyaniweyo kunye nevolumuUlwakhiwo, umnikezeli kunye nomamkeli, umncedisi kunye nomchasi, iindima zokwenza indima kunye neendima, umxholo wokuziphatha.
Ubume bexeshana njengombandela wokugcina uxinzelelo lwesicatshulwa: Ukubaliswa njengentaka, ulungelelwaniso, ukwahlukana, ukubuyela umva. Isingqisho, i-ellipsis, isishwankathelo, imeko, ukwehla, ukunqumama.
Njengangaphambili, ikwa-100% ubuso ngobuso kwaye yenzeka kwisixeko saseMadrid.
Iworkshop yebali elililo
Utitshala oyifundisayo unjalo U-Angela Medina Kwaye ngokungafaniyo nezi zimbini zidlulileyo, le ikwi-Intanethi ngokupheleleyo kwaye ihlala iiveki ezisibhozo. Ixabiso layo ngu 175 euro.
El I-temary eyicombileyo yile:
Umahluko phakathi kwebali kunye nenoveli.
Uliqala njani ibali.
Ukunikezelwa kunye nokuvela komlinganiswa.
Indlela yokuphelisa ibali.
Bhala ipheibali elifanelekileyo.
Kwaye eyona nto intle malunga nale khosi kukuba ukuba awufuni ukuqala namhlanje, awunakukhathazeka, kuba veki nganye, ekuqaleni kwayo, iworkshop entsha iqala.
Ukuba uthanda nayiphi na yezi zifundo okanye ufuna ukuqhubeka nokufunda malunga nezinye ezininzi, eli likhonkco kwihotele Kafka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iikhosi zoncwadi kwihotele Kafka
Iindaba zokuhlela ngoMatshi